Point Sunflower Seed 80G4Packs – SUNNY eSTORE
Point Sunflower Seed 80G4Packs
SUNNY Everyday StoreSKU: 680044651293
ပွိင့် နေကြာစေ့ဟာဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံ ရဲ့နာမည်ကြီး သော နေကြာစေ့တံဆိပ် ဖြစ်ပါတယ်။ ပွိင့်မှ နေကြာစေ့များ မှာအလွန်တန် ပြီး နေကြာစေ့ quality ဟာထိပ်တန်းအဆင့်ရှိပါတယ်။ နေ့ကြာစေ့ အစေ့ တိုင်းဟာ သေသေချာချာ ပြင်ဆင်ထားသောကြောင့် သင် တစ်စေ့စားတိုင်း စိတ်ကျေနပ်မှုရရှိ ပါမယ်။
ပါဝင်သော ပစ္စည်းများ - နေကြာစေ့ ၊ ကြက်သွန်ဖြူ ၊ ဂျင်း ။
Point Sun Flower Seed is one of the most famous sunflower seed brands in Myanmar. It is affordable and the quality of the sunflowers seeds is top-notch. Every seed in the packets is deliciously prepared so you will not get disappointed after every seed you eat.
Key Ingredients: Sunflower seeds, garlic, and ginger
Includes -4packs of Point Sunflower Seed (80g)